ဗဟုသုတ Archives - Page2of2- Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » Posts tagged with 'ဗဟုသုတ' (Page 2)
Zwe Thet Paing | Knowledge, news | September 17, 2013
ဒေါ်လာ ၂၇ သန်းကျော်နဲ့လေလံအောင်မြင်သွားတဲ့ Ferrari
၁၉၆၇ ခုနှစ်က ၁၀ စီးသာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး မြောက် ကယ်ရိုလိုင်းနားက မိသားစုတစ်ခုက ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ လေလံပွဲ အတွင်းမှာ စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူဦးရေများပြားခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးမှာ ဒေါ်လာ ၂၇.၅ သန်းနဲ့လေလံအောင်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကားရဲ့ မူလပိုင်ရှင်ကတော့ …..
Dogs imitate human
Zwe Thet Paing | Knowledge, news | September 13, 2013
အိမ်မွေးခွေးတွေက သူတို့သခင်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှူကို သိနိုင်ကြပါသလား ?
အိမ်မွေးခွေး တွေဟာ သူစိမ်းတွေ သမ်းဝေတဲ့ အချိန်မှာထက် သူတို့သခင်တွေသမ်းတဲ့ အချိန်မှာ လိုက်သမ်းတတ်ကြပါတယ်လို့ လေ့လာမှု အသစ်တစ်ရပ်အရ ကောက်ချက်ချကြပါတယ်။ အဲဒီ ခွေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့သခင်တွေနဲ့စိတ်ခံစားမှူချင်း ဆက်နွယ်နေကြပါတယ်လို့ တိုကျို တက္ကသိုလ်က လေ့လာရေးခေါင်းဆောင် Ms. Teresa Romeo ကပြောပါတယ်။
ခွေးတွေဟာ လူတွေ သန်းဝေတာ မြင်တဲ့ အခါမှာ …..